Gott – eine Einführung | Weltweite Kirche Gottes Schweiz | Weltweite Kirche Gottes Schweiz
ဆောင်းပါး > ခမည်းတော်ဘုရား > ဘုရားသခငျသညျ - တစ်ဦးမိတ်ဆက်
ခရစ်ယာန်များအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အခြေခံအကျဆုံးယုံကြည်ချက်မှာဘုရားသခင်တည်ရှိကြောင်းဖြစ်သည်။ ဆောင်းပါးမပါဘဲ၊ ထပ်ဆောင်းထပ်ဆောင်းခြင်းမရှိဘဲ "ဘုရားသခင်" အားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သမ္မာကျမ်းစာ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်သည်။ အရာအားလုံးကိုဖန်တီးတဲ့သူ၊ ငါတို့ကိုဂရုစိုက်တယ်၊ ငါတို့လုပ်ရပ်တွေကိုဂရုစိုက်တယ်၊ ငါတို့ဘဝမှာရော၊ ကောင်းမြတ်တော်မူခြင်းအားဖြင့်ထာဝရကာလကိုပေးတဲ့သူဟာစွမ်းအားကောင်းတဲ့စွမ်းအားတစ်ခု။ ဘုရားသခင်ကလူကိုနားမလည်နိုင်ဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစပြုနိုင်သည်ဘုရားသခင်အားအသိပညာတည်ဆောက်ခြင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်သူ၏ရုပ်ပုံ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်နှင့်ဘုရားသခင်သည်မည်သူဖြစ်သည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်သူသည်အဘယ်သို့ပြုသည်ကိုသိရန်ကောင်းသောအစဖြစ်သည်။ ယုံကြည်သူအသစ်တစ် ဦး သည်အထူးအထောက်အကူပြုနိုင်သည့်ဘုရားသခင်၏အရည်အသွေးများကိုကြည့်ကြစို့။
Viele Menschen – auch langjährige Gläubige – wollen Beweise für Gottes Existenz. Gottesbeweise, die jedermann zufriedenstellen, gibt es aber nicht. Es ist wahrscheinlich besser, von Indizien oder Anhaltspunkten statt von Beweisen zu sprechen. Die Indizien geben uns Sicherheit, dass Gott existiert und dass sein Wesen dem entspricht, was die Bibel über ihn sagt. Gott hat «sich selbst nicht unbezeugt gelassen, verkündete Paulus den Heiden in Lystra (Apostelgeschichte 14,17) မိမိကိုယ်ကို သက်သေခံခြင်း - ၎င်းတွင် အဘယ်အရာပါဝင်သနည်း။
ဆာလံ ၁9,1 steht: Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. In Römer 1,20 heisst es: Denn Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Die Schöpfung selbst sagt uns etwas über Gott.
စီစဉ်ခြင်း: ဖန်ဆင်းခြင်းသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဥပဒေများ၏အမိန့်လက္ခဏာများကိုပြသသည်။ အကယ်၍ အရာဝတ္ထု၏အခြေခံဂုဏ်သတ္တိများသည်အနည်းဆုံးကွဲပြားခြားနားပါက၊ အကယ်၍ ကမ္ဘာကြီးမရှိလျှင်လူသားများသည်မတည်ရှိနိုင်ပါ။ အကယ်၍ ကမ္ဘာမြေသည်အခြားအရွယ်အစားသို့မဟုတ်အခြားပတ်လမ်းတစ်ခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာဂြိုဟ်ပေါ်ရှိအခြေအနေများကလူ့အသက်ကိုခွင့်မပြုနိုင်ပါ။ အချို့က၎င်းကိုနတ်မင်းကြီးတိုက်ဆိုင်မှုဟုယူဆကြသည်။ အခြားသူများကမူနေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစနစ်ကိုအသိဉာဏ်ရှိဖန်ဆင်းရှင်မှစီစဉ်ထားကြောင်းရှင်းပြရန် ပို၍ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သည်ဟုယူမှတ်ကြသည်။
ဘဝသည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှုပ်ထွေးသောဓာတုဒြပ်စင်များနှင့်ဓာတ်ပြုမှုများအပေါ်အခြေခံသည်။ အချို့ကဘဝကိုအသိဉာဏ်ရှိစွာဖန်တီးထားခြင်းဟုယူဆကြသည်; အခြားသူများကဒါဟာတိုက်ဆိုင်မှုစဉ်းစားပါ။ အချို့ကသိပ္ပံပညာသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ဘုရားသခင်သည်ဘုရားသခင်မရှိသောဘဝ၏မူလအစကိုသက်သေပြလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ သို့သော်လူအများစုအတွက်အသက်တည်ရှိခြင်းသည်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်၏လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်သည်။
လူ၌ Self- ရောင်ပြန်ဟပ်မှုရှိပါတယ်။ သူသည်စကြာ ၀ universeာကိုစူးစမ်းလေ့လာခြင်း၊ ဘဝအဓိပ္ပာယ်ကိုစဉ်းစားသည်၊ ယေဘုယျအားဖြင့်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှာဖွေနိုင်စွမ်းရှိသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှုအစားအစာ၏တည်ရှိမှုအကြံပြု; ရေငတ်ခြင်းကထိုရေငတ်မှုကိုငြိမ်းစေနိုင်သောအရာတစ်ခုခုရှိကြောင်းအကြံပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့၏တောင့်တသောစိတ်ဆန္ဒသည်အဓိပ္ပာယ်ကိုအမှန်တကယ်တည်ရှိပြီးတွေ့ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုလိုပါသလော။ လူများစွာကဘုရားသခင်နှင့်သူတို့၏ဆက်ဆံရေးတွင်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
ယေရှုခရစ်၌ အရှင်းလင်းဆုံးဖော်ပြသည့် ဘုရားသခင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စံနမူနာဖြစ်သည်– “ဒါက ချစ်ခြင်းမေတ္တာပဲ၊ ဘုရားသခင်က ငါတို့ကိုချစ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘဲ၊ ငါတို့ကိုချစ်ပြီး ငါတို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက် အပြစ်ဖြေဖို့ သားတော်ကို စေလွှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်။ ချစ်သူတို့၊ ဘုရားသခင်သည် ငါတို့ကို ဤမျှလောက်ချစ်တော်မူလျှင်၊1. Johannes 4, 10-11). Leben wir in Liebe, wird das ewige Leben eine Freude sein, nicht nur für uns, sondern auch für diejenigen, die um uns sind.
ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ကရုဏာကိုကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်တုံ့ပြန်ကြသည်။ သစ္စာရှိမှုနှင့်အတူသူ၏ကျေးဇူးတော်အပေါ်သို့; သူ့အပေါ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ။ ငါတို့ကသူ့ကိုကြည်ညိုလေးစားတယ်၊ ငါတို့ကိုပိုချစ်မြတ်နိုးတယ်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုပြသခဲ့သည်နည်းတူကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်၌ရှိသောလူများကိုလည်းချစ်ရန်သူ၏ပြောင်းလဲခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုသည်။ ငါတို့မှာရှိသမျှ၊